I-China Dual Biosafety System Device yabakwaSARS-CoV-2 Antigen Rapid Test abakhiqizi nabaphakeli | I-Liming Bio
I-TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test iyindlela yokuhlola esheshayo ye-immunochromatographic yokuthola i-antigen ye-COVID-19 igciwane le-SARS-CoV-2 ku-swab yabantu / ye-Nasopharyngeal swab. Isilingo sisetshenziswa njengosizo ekutholeni i-COVID-19.
Ukusetshenziswa ngamalabhoratri emitholampilo noma abasebenzi bezempilo kuphela
Ukusetshenziswa Kwezobuchwepheshe Kwezokwelapha Kuphela
Letha izingxenye zekithi ekamelweni lokushisa ngaphambi kokuhlolwa. Vula isikhwama bese ususa idivayisi yokuhlola.
Uma sekuvuliwe, idivayisi yokuhlola kufanele isetshenziswe ngokushesha.
Faka ilebula kudivayisi yokuhlola ngobunikazi besiguli.
Khipha ikhava yedivayisi.
1. Faka i-swab kushubhu, uphule i-swab nge-breakpoint, vumela i-swab eyisampuli iwele kubhubhu bese ulahla induku engenhla.
2. Sula ikhava yedivayisi.
3. Phula induku eluhlaza okwesibhakabhaka.
4. Cindezela NGOKUSHESHA ishubhu eliluhlaza okwesibhakabhaka, qiniseka ukuthi konke uketshezi kuwela kushubhu engezansi.
5. Vortex idivayisi ngamandla.
6.Guqula idivayisi, vumela isampuli sesikhashana lifudukele kumugqa wokuhlola.
7. Faka idivayisi endaweni yokusebenza.
8. Ekupheleni kwemizuzu engu-15 funda imiphumela. Isampula elihle eliqinile lingabonisa imiphumela ngaphambilini.
Qaphela: Umphumela ngemuva kwemizuzu engu-15 kungenzeka ungabi onembile.
IMIKHAWULO OF THE UVIVINYO
1. Okuqukethwe yileli kit kuzosetshenziselwa ukuthola ikhwalithi yama-antigen akwa-SARS-CoV-2 avela ku-throat swab nase-nasopharyngeal swab.
2. Lokhu kuhlolwa kuthola kokubili okusebenzayo (bukhoma) nokungasebenzi, i-SARS-CoV-2. Ukusebenza kokuhlola kuncike enanini legciwane (i-antigen) kusampula futhi kungenzeka noma kungahlangani nemiphumela yesiko legciwane eyenziwe kusampula efanayo.
3. Umphumela wokuhlolwa ongemuhle kungenzeka uma izinga le-antigen esampulini lingaphansi komkhawulo wokutholwa kwesivivinyo noma uma isampula liqoqiwe noma lathuthwa ngokungafanele.
4. Ukwehluleka ukulandela Inqubo Yokuhlola kungaphazamisa ukusebenza kokuhlolwa futhi / noma kwenze imiphumela yokuhlolwa ingasebenzi.
5. Imiphumela yokuhlolwa kufanele ihlolwe ngokuhlangana nenye idatha yomtholampilo etholakala kudokotela.
6. Imiphumela emihle yokuhlolwa ayikunqandi ukutheleleka ngokuhlanganyela namanye amagciwane.
7. Imiphumela engemihle yokuhlolwa ayihloselwe ukulawula kwezinye izifo ezingezona ze-SARS ezibangelwa amagciwane noma amagciwane.
8. Imiphumela engemihle kufanele iphathwe njengokugabadela futhi iqinisekiswe nge-FDA egunyaziwe yokuhlolwa kwamangqamuzana, uma kunesidingo, ekuphathweni kwemitholampilo, kubandakanya nokulawulwa kokutheleleka.
9. Izincomo zokuzinza kwe-specimen zisuselwa kudatha yokuzinza kusuka ekuhlolweni komkhuhlane nokusebenza kungahluka nge-SARS-CoV-2. Abasebenzisi kufanele bahlole ama-specimens ngokushesha okukhulu ngemuva kokuqoqwa kwesifanekiso.
10. Ukuzwela kwesilingo se-RT-PCR ekutholeni i-COVID-19 kungama-50% -80% kuphela ngenxa yekhwalithi yesampula engeyinhle noma iphuzu lesikhathi sesifo esigabeni esibuyiselwe, njll. Ukuzwela Kwedivayisi Yesivivinyo Esisheshayo se-Antigen kuyinkolelo ephansi ngenxa yeMethodology yayo.
Langaphambilini Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-SARS-CoV-2
Olandelayo: Idivayisi Yesistimu ye-SARS-CoV-2 ne-Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test
Idivayisi Yesistimu Ye-Dual Biosafety YeSars-Cov-2 Antigen Test
Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, ICoronavirus Antigen Test Kit,